Traintravel မော်ကွန်း | စာမျက်နှာ4၏ 16 | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: ရထားခရီးသွား
နေအိမ် > ရထားခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဒါကြောင့်သင်ကနောက်ဆုံးတော့ပြုပါတယ်. သငျသညျအလုပျမှာသင့်ရဲ့အားလပ်ရက်များအတွက်အတွက်ထားပြီးပြီ, မင်းရဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ၀ ယ်ခဲ့တယ်, ထိုက်တန်တဲ့အားလပ်ရက်အတွက်ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကိုခရီးဆက်ခဲ့တယ်. ထိုရှိသမျှကောင်းနှင့်ကောင်းပါတယ်စဉ် – နောက်ဆုံးတော့, ဘူဒါပက်လှပသောမြို့ဖြစ်၏ – ကိုယ့်ကိုကိုယ်မရောင်းကြဘူး…
စာဖတ်ချိန်: 11 မိနစ်များ ပြင်သစ်ရှည်လျားဥရောပတိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာများတစ်အကြိုက်ဆုံးနှင့်တဦးတည်းခဲ့. ဒါကြောင့်အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကြောင်းပေးထား, ဒါကြောင့်ရထားခရီးသွားမှသဘာဝကျပါတယ်. ပြင်သစ်အစိုးရမြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားပါတယ် (မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်း…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပ၌ကျော်ကြားရုံဥရောပယဉ်ကျေးမှု၏ထည်သို့ယက်နေကြ. ဥရောပ၌နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ရုံသင်သည်ထူးခြားသောတင်ဆက်မှုကတိပေး. ဒါဟာနှိုးဆော်သင်ချန်ထားမည်, ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, နှင့် spellbound! အနုပညာဖျော်ဖြေ၏သဘောသဘာဝ spectacularly ခဏနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုယ်ကဖြစ်ပါတယ်. ဤထက်မြက်သောအလင်းတန်းများသည်ဆက်ရှိနေသည်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ကြှနျုပျတို့သညျဤသစ်ကိုဆယ်စုနှစ်ထဲသို့မဝင်ရအဖြစ် Eco ဖော်ရွေခရီးသွားကြှနျုပျတို့၏စိတျ၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သောရောဘတ် Swan နှင့် Greta Thunberg အဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့်အတူ, ကမ္ဘာကြီးကိုဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည်လင်ရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်အတူကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေပါသည်. ကျနော်တို့အချိန်ကအပြေးနေကြသည်…
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, Eco ခရီးသွားအချက်အလက်များ, ရထားခရီးသွားခြင်း, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သာရွေးချယ်ဖို့ခဲယဉ်းသည်5လွယ်ကူသောနေ့သင်နှင့်အတူရှယ်ယာမှမီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips. အီတလီ၏ဖက်ရှင်မြို့တော်သည်ခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်. ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်နှင့်ပြည့်စုံသည်သာမက, သို့သော်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သမိုင်းရှိပါတယ်, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, and beautiful scenery…
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ အမှုအရာပဲရစ်တွေအများကြီးများအတွက်လူသိများသည်ရှိပါသည်. ဒါပေမယ့်ပဲရစ်လုပ်ဖို့အခမဲ့အမှုအရာသည်လူသိများသည်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ. ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးရင်ခုန်စရာသောနေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျော်ကြား. ပင်တစ်ဦးကဖက်ရှင်မြို့တော်နဲ့စာပေပရဒိသု!…